ပြန်ရေးတော့မယ် ဆိုတဲ့ အကြောင်း…. | ကိုသင်ကာ . . . . Ko Thinker
← Friends of Burma
ရန်ကုန် လည်ပြန် →
May 29, 2008 · 7:31 am
ပြန်ရေးတော့မယ် ဆိုတဲ့ အကြောင်း….
အဆိုးထဲက အကောင်းအဖြစ် သတင်းကောင်းပေးချင်တာကတော့ ကျနော့ရဲ့ ဘလော့ဂ်ပရိသတ်များများအတွက် ပုံနှိပ်ဖော်ပြီး၊ မဖော်ပြရသေး၊ လက်ရေးမူကြမ်း စာ၊ ကဗျာ၊ ဆောင်းပါးများစွာ သယ်ဆောင်လာကြောင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
စိတ်ရော လူပါ မောလွန်းလို့ ခဏလောက် နားပရစေဦး။ ပြီးရင် သူတ ရသ စုံလင်အောင် ရေးသားပါမည်ဖြစ်ကြောင်း….။
0 responses to “ပြန်ရေးတော့မယ် ဆိုတဲ့ အကြောင်း….”
ကြိုဆိုပါ၏ဗျာ။ ပြန်ရောက်တာ မသိလိုက်ဘူး။ အခုမှ ရောက်ဖြစ်လို့. 🙂